Ahoana no hahazoam-peo tsara ho an'ny tranokalanao miaraka amin'ny paikady izay miasa?
Ny tompon'ny tranonkala rehetra izay te hanatsara ny laharam-piantsenan'izy ireo dia mitady ny fomba hiverenan'ny rindranasa ho an'ny tranonkala. Ireo rohy tafiditra ao dia rindran-javatra manan-danja ho an'ny tranonkalan'ny tranonkalanao ary mifidy ny fahefana manamarika anao. Ny fananganana rohy dia dingana amin'ny famoronana rohy vaovao mifandraika amin'ny tranokala hafa mifandraika amin'ny tanjona amin'ny fampiakarana ny marika ary manintona kokoa ny fifamoivoizana amin'ny loharano mifandray. Ny fampifanarahana ny fananganana tranokala dia manondro ny fanatsarana ny pejy tsy tokony hatao ary tokony hatao aorian'ny fampivoarana ny tranokala sy ny fampitomboana ny fampiasana, ny hatsaran'ny fananana kalitao, ary ny famoronana fanorenana. Rehefa vita avokoa ny fomba fanatsarana ny pejy rehetra, fotoana izao hanehoana ny tranokalanao ho an'ny mpihaino marobe. Ny fanorenana ny rohy dia mitovy amin'ny teny am-bava, izay mifanaraka amin'ny paikady ara-barotra eo amin'ny marketing - snow and ice removal services maryland.
Tsy azo atao ny mamorona ny backlinks rehetra. Toy izany koa ny antony tokony hahafantaranao ireo anton-kevitra sasantsasany momba ny backlinks amin'ny ankapobeny izay ahitana:
Ny rohy miditra dia mahery rehefa avy amin'ny loharanom-baovaon'ny sehatry ny indostria.
Tokony hojeren'ny natiora ny lahatsorin-dokoo ary tokony hifanaraka amin'ny lohahevitra iray sy ny teny fototra misy anao.
Ny lahatsoratra manodidina ny fichier dia tokony ho ilaina sy ilaina. Ny mpampiasa dia tsy tokony hahasarika izany ho toy ny dokam-barotra.
Ny isan'ny rohy tafiditra ao amin'ny pejy mifandray amin'ny anao.
Ny fahefana an-dalan'ny rohy sy ny lazany.
Ilay tranonkala PageRank.
Ankoatr'izay dia mila mitadidy ireto antony manaraka ireto ianao raha manorina rohy amin'ny tranokalanao:
Tokony havaozina amin'ny sehatra maro ny backlinks mba hampisehoana an'i Google fa hankasitraka ny votoatin'ny olona maro ianao. Ankoatra izany, amin'ny famoronana rohy amin'ny sehatra samihafa, dia manatsara ny mombamomba anao ianao ary manamboatra azy kokoa.
Ny fifandanjana eo amin'ny rohy dofollow sy nofollow
Mazava ho azy, ny tanjona voalohany amin'ny fanorenana tranonkala ny ankamaroan'ny webmasters dia ny mahazo ny dofollow backlinks satria izy ireo no mandefa Mampifandray siramamy amin'ny loharano mifandray. Na dia izany aza, mba hamoronana profesora malaza sy voajanahary ianao, dia mila mamorona rohy ivelany sy doka noforary.
Mila mamorona lahatsoratra endritsoratra samihafa ho an'ny rohy rehetra miditra ianao. Ankoatra izany, ny andinin-tsompitrao amin'ny endriny dia tsy tokony hitodika mitovy amin'ny anaranao na ny tenimiafina voafantina. Ataovy ao an-tsaina fa ny andalan-teny farany ho an'ny teny farany dia mety hanimba ny lazanao ary hitondra sazy Google.
Talohan'ny fananganana Google goavana tamin'ny taona 2012, ireo mpampiasa webmasters dia nanisy lanjany ny isan'ny rohy fidirana fa tsy ny kalitao. Na izany aza, raha vao niditra ny lalao ny Google Penguin, dia nanjary tsy nahomby ny tetikasa fanorenana tranokala mainty hoditra SEO.
Noho izany, andeha hodinihintsika ny fomba hiverenana ny rohy mankany amin'ny tranokala amin'ny fomba organika:
You dia afaka mahazo rohy fanoratana amin'ny alalan'ny fifandraisany amin'ny tranokala avo momba ny Niche ary miresaka amin'izy ireo ny fanantenanao ny fananganana rohy. Na izany aza, mila miomana ianao mba hahatongavana any amin'ny tompona tranonkala maro ary vokatr'izany dia tsy hiraharaha azy ireo na handray valiny ratsy. Azonao atao ny manamarina ny fahefan'ny tranokala mifandraika amin'ny tranokala mampiasa ny Semalt Web Analyzer na Majestic.